खाने तेल र फलामे डन्डीको मूल्य केही सस्तियो ! - Laltin Media
Home»आर्थिक खबर»खाने तेल र फलामे डन्डीको मूल्य केही सस्तियो !
खाने तेल र फलामे डन्डीको मूल्य केही सस्तियो !
By लाल्टिन डट कम June 17, 2022 Updated: July 7, 2022 No Comments2 Mins Read
केही दिनयता खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि ३० रुपियाँसम्म सस्तिएको छ । युक्रेन र रुसबीचको युद्धका कारण उच्चदरमा बढेको खाने तेलको भाउ तीन दिनयता घट्न थालेको हो ।
भारत निर्यात रोकिएपछि खपत बढाउन तेल उद्योगीले मूल्य घटाएको खुद्रा तथा थोक व्यापारीले बताएका छन् । यसैगरी अहिले भारतमा खाने तेलमा शून्य भन्सार दर भएका कारण भारतबाट नेपालतर्फ चोरी पैठारी बढेको व्यापारीले बताएका छन् । किराना तथा थोक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले खाने तेलको बिक्री कम भएर मौज्दात हुन थालेपछि उद्योगीले नै मूल्य घटाएर भए पनि बिक्री गर्न बाध्य भएको बताए ।
तेल उद्योगीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेसँगै नेपालमा पनि मूल्य घटेको बताएका छन् । नेपाल घिउ तेल उत्पादन सङ्घका अनुसार नेपालमा हाल तेल घट्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य घट्नु रहेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले डन्डीको माग नै घटेकाले मूल्य घटेको बताए । नेपाल स्टिल उद्योग सङ्घले भने स्टिलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेसँगै नेपालमा पनि घटेको जनाएको छ ।
#खाने तेल र फलामे डन्डीको मूल्य केही सस्तियो